Pogba oo ay ka lumeen Dhego DHEEMAN ah kaddib markii ay Tababarka ku dagaaleen Jose Mourinho iyo Laacibka oo BALAN QAADAY…!! – Gool FM
Pogba oo ay ka lumeen Dhego DHEEMAN ah kaddib markii ay Tababarka ku dagaaleen Jose Mourinho iyo Laacibka oo BALAN QAADAY…!!
Byare September 28, 2018
(Manchester) 27 Sab 2018. Paul Pogba ayaa ku jira usbuuc jahwareer ah, waxaa lagu eedeeyay bandhig xumo, waxay tababarka ku dagaaleen Jose Mourinho waxaase uga sii darnaa inay ka lumeen dhegihiisa Dheemanka oo qiimo badan ugu fadhiyay.
Ku dhawaad 25-shaqaale ee ka tirsan Man United ayaa isku dayday inay Dhegaha Dheymanka u helaan laacibka reer France kaddib tababarkii talaadada ee xerada Carrington, balse lama helin.
Pogba ayaa abaal marin lacag ah u balan qaaday cidii cowska xerada tababarka kooxda ka soo helaa dhegihiisa qiimaha badan ugu fadhiya.
Xaalada Mourinho iyo Pogba ayaa meel xun mareysa, Macalinka reer Portugal ayaa kabtanimada ka qaaday Pogba isla markaana u sheegay inuusan mar dambe kabtan u noqon kooxda.
Jose iyo Paul ayaa isku dagaalay xerada tababarka kaddib markii uu Mourinho ka carooday wax uu laacibka reer France ku soo qoray Istagram kiisa kaddib guul daradii lama filaanka ay kala kulmeen naadiga Derby.
Ilo Wareed la helay ayaa sheegaya:
“Pogba ma qaadanayo iminka waqtigiisii ugu fiicnaa ee kooxda sida uu qofkasta ogyahay. Waxaa laga xayuubiyay Kabtanimada, waxay dagaaleen Tababaraha isla markaana ma hubo soo dhaweyn ceynkee ah ayuu kala kulmi doonaa kulanka xiga ee Man Unied.
“Waxaa taa ugu darsamay inuu ka lumay Dhago ku kacaya kumanaan bound wuxuuna u ahaa Usbuuc qariban.
“Wuxuu shaqaalaha xerada tababarka u sheegay inuu siin doono abaal marin lacageed oo fiican qofkii u soo helaa dhegaha Dheemanka ah.”.
“Barcelona waxay ku jirtaa xaalad adag oo jahwareer ah”… Sergio Busquets
“Real Madrid waxaa ka muuqda walwal, sidoo kale…”.- Jorge Valdano